Tag: famoahana horonantsary | Martech Zone
Tag: famoahana horonan-tsary
Animaker: Studio Animation ho an'ny tenanao manokana, Editor amin'ny horonan-tsary amin'ny marketing, ary mpanamboatra doka horonantsary
Sabotsy, Janoary 23, 2021 Sabotsy, Janoary 23, 2021 Douglas Karr
Ny horonan-tsary mihetsika sy mivantana dia ilaina amin'ny fikambanana rehetra. Mampientanentana be ny horonan-tsary, manana ny fahaizana manazava fohy ireo hevitra sarotra ary manome traikefa izay hita maso sy heno. Na dia fitaovana tsy mampino aza ny horonan-tsary dia matetika tsy voavaha ho an'ny orinasa kely na mpivarotra noho ny loharano ilaina: horonan-tsary sy fitaovana audio ho an'ny fandraisam-peo. Fanamafisam-peo matihanina ho an'ny soratananao. Sary matihanina sy sarimiaina hampidirina. Ary, angamba, ny lafo indrindra ary